Nosy La Réunion manapaka ny firaketana ny fahatongavan'ireo mpizahatany
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Nosy La Réunion manapaka ny firaketana ny fahatongavan'ireo mpizahatany
Na teo aza ny faran'ny taona sarotra dia nahasoa ny taona 2018 ary manan-tantara ho an'ny fizahan-tany any Réunion aza satria mpitsidika ivelany mihoatra ny 574,000 no noraisina. Ity dia 4.1% bebe kokoa noho ny tetibola 2017, izay efa nisy fitsidihan'ny mpitsidika tsy mbola nisy toa azy.
Tamin'ny taona 2018, sambo 35 sy mpandeha fitsangantsanganana 39,433 no tonga tany amin'ilay nosy, izay nahafa-po, na dia somary ambany ihany aza satria orinasa maromaro no voatery nandinika ny lalan'izy ireo tamin'ny Novambra sy Desambra.
Na eo aza izany, miaraka amin'ny fidiram-bola mbola mitombo ary mitentina 432 tapitrisa euro, ary firaketana vaovao ihany koa ho an'ny toerana haleha, ny sehatry ny fizahan-tany dia manamafy ny toerany eo amin'ny toekaren'i La Réunion.
Ireo mpifanila vodirindrina amin'i Reunion ao amin'ny Ranomasimbe Indianina dia mbola mankafy ny toerana halehany. Ny fahatongavana avy amin'ny faritry ny Ranomasimbe Indianina dia mijanona mihoatra ny 60,000 ny mpizahatany amin'ny taona 2018, taorian'ny fisondrotana mahavariana 46% voarakitra tamin'ny taona 2017. Tao anatin'ity faritry ny Ranomasimbe Indianina ity, i Maorisy no mijanona ho tsenan'ny loharanom-baovao satria misy mpizahatany maherin'ny 30,000, na 5.8% amin'ny totalin'ny tonga. mankany La Réunion.
Ny hetsika fifandraisana sy fampiroboroboana natao teo amin'ny tsena eropeana lehibe, ankoatran'i Frantsa, dia nahitam-bokatra ihany koa, satria ity tsenan'ny loharanom-pahalalana mpitsidika ity dia mahatratra 7.4% amin'ny totalin'ny fahatongavana, raha oharina amin'ny 6% tamin'ny taona 2017. Tamin'ny totaliny, 39,664 ny mpitsidika tonga avy ny sisa any Eropa amin'ny 2018 izay 4.2% mihoatra ny tamin'ny taon-dasa!
Tsy mahagaga raha ny mpanjifa fialamboly dia misolo tena ny ankamaroan'ny mpitsidika tonga miaraka amin'ny 90.8% amin'ny totalin'ny fahatongavan'ilay nosy, ampiarahana amin'ny fizahan-tany 8.5%.
Ny faharetan'ny fijanonan'ny mpizahatany vahiny dia 17 andro ary mijanona tsy miova raha oharina amin'ny 2017, isa iray manan-danja indrindra amin'ny toerana lavitra toa an'i Réunion.
Seranam-piaramanidina Boston-Logan: zotra iraisam-pirenena vaovao